Ipakethi yeeflaya zeNgcali ezili-100 2016 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sele intwasahlobo kwaye amaqela kunye nemicimbi ziqala ukunyuka, ziqala ngemibhiyozo enje ngemibhiyozo nobhaptizo, imibhiyozo yasentwasahlobo ngokwabo kunye nezo zikhokelela ehlotyeni. Ngombono ongaphambili, lixesha lokuba sizilungiselele, akunjalo? Ndiqinisekile ukuba uninzi lwenu lelinye lamaxesha onyaka apho kuvela iiprojekthi kunye nemisebenzi, ke ndifuna ukwabelana namhlanje kwaye ndiqale iveki ndinethemba elilungileyo lokufumana iphakheji enamanzi: Akukho ngaphezulu okanye ngaphantsi Iitemplate eziyi-100 ezihlelayo zeeflaya kunye neendidi ezahlukeneyo onokuzisebenzisa kuzo zonke iintlobo zezihlandlo.
Inyani yile yokuba emva kokujonga ekukhetheni ndishiyeke ndinencasa elungileyo emlonyeni wam, kuba andikubonanga kuphazamiseka kuso nasiphi na isindululo. Itotali, eyipakethi ekhuthazwayo kakhulu, ke ukuba unabalingane kweli hlabathi, uyazi, ulawule ukuba ngubani othi. Sonke siyayazi ukuba yamkelekile njani imithombo yegraphic, nokuba yeyiphi na kwaye ngakumbi xa sinqongophele yimbalela kwaye sifuna idosi eyongezelelweyo yokuphefumlelwa kwaye kutheni kungenjalo, uncedo olongezelelekileyo.
Ungafikelela kwiphakheji ukusuka kwesi sixhobo. Nantsi isampulu enezinye zeeprojekthi ezinokuhlelwa ezibandakanya (zonke zikwifomathi yePSD). Njengoko ubona singafumana kwiiflaya zamaqela ukuya kwiminyhadala yemfundo nenkcubeko. Ukhuphelo aludingi kuhlawulwa ngokuqinisekileyo kwaye akukho nkqubo yentlawulo yentlalo (uyazi Hlawula ngeTwitter nganye kunye nezinto). Ngaphandle kokuthetha, Masiyonwabele!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ipakethi yeeFlaya zeNgcali ezili-100 ngo-2016
Emilio Zocco sitsho
IMIBUZO !!!! UKUQINISEKA NGOKWENENE KWEENDALO.
Phendula emilio zocco